Mayelana NATHI - I-Haojing International Trade (Shanghai) Co., Ltd.
I-HaoJing eyamazwe omhlaba
Iminyaka engama-20 yesipiliyoni sokusebenza
I-Haojing International Trading yasungulwa ngo-2020. Ifektri yethu yasungulwa ngo-2003 Sinezimboni ezimbili ezingabanikazi baseShanghai naseZhejiang. Kungumhlinzeki wesixazululo semishini yokukhiqiza imaski ezinikele ekunikezeni izixazululo ezisezingeni eliphakeme kumakhasimende emhlabeni jikelele.
Njengamanje sinabasebenzi abangu-180, kufaka phakathi ama-R & D angama-30 nabasebenzi bezobuchwepheshe. Ngemuva kweminyaka yokusebenza kanzima, inkampani inamalungelo obunikazi angaphezu kwe-100 futhi isibe ibhizinisi eliphakeme elisekelwa nguHulumeni Wesifunda SaseShangjiang.
Kusukela ngo-2020, ukushintsha kwe-HAOJING kusuka ekuhwebeni kwasekhaya kuye ekuhwebelaneni namanye amazwe, bese kuqala ukukhiqiza imishini yomaskhi ngaphansi kwemvelo jikelele, kufaka phakathi imishini yemaski eyisicaba, imishini yokuzifihla ye-N95 nemishini yemaski yenkomishi, njll. Izidingo, kufaka phakathi Indwangu engalukiwe, indwangu encibilikayo, umucu wamakhala kanye nentambo yezindlebe, njll. Kunezinhlobo ezi-11 zemikhiqizo, kufaka phakathi imigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo kanye nengxenye ezenzakalelayo.
Izinhlobo zethu zomkhiqizo ziphelele, ezingafinyelela izidingo ezahlukahlukene zamakhasimende, kufaka phakathi izinto zokusetshenziswa zokukhiqiza imaski, esingazinikeza. Imikhiqizo eminingi nobuchwepheshe buthole amalungelo obunikazi kazwelonke futhi bathola ukuvunywa kwe-CE.
Ngemuva konyaka wentuthuko, imishini yethu ithengiselwe i-United States, iTurkey, iSpain, iMexico, iPakistan kanye neSouth Korea. Yonke imikhiqizo yethu izovivinywa futhi idutshulwe ngevidiyo ngaphambi kokuthunyelwa, futhi imishini izobe iyindlela yokulwa nokugqwala ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende angasebenzisa imishini yethu kahle.
Izicelo zifaka ukunakekelwa kwezempilo, imboni ye-elekthronikhi, imboni yokudla, ukunakekelwa kobuhle nemvelo yezimboni, njll.
IHaojing igxile ekukhiqizeni, ukuthuthukisa kanye nokuthengisa imishini ye-N95 mask, imaski eyisicaba, imishini yesifihla-buso, imishini yemaski ye-KF94 kanye nemishini yesifihla-duckbill. Kunezinhlobo ezi-11 ezahlukahlukene zemikhiqizo, kufaka phakathi imigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo ezenzakalelayo ne-semi-othomathikhi.
Sinamasifundisane wokukhiqiza ama-3 nama-workshops womhlangano ama-2. Inemishini yayo ye-CNC yokwenza imishini, isikhungo semishini ye-axis emihlanu kanye nomshini wokusika we-laser we-6000W.
Indawo yokusebenzela ihlanzekile futhi ihlanzekile. Kukhona abahlanzayo nsuku zonke. Manje ifektri inemishini eminingi yemaskhi esitokweni, engahlangabezana nezidingo zamakhasimende eziningi. Sinemigqa eminingi yokukhiqiza ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende angathola umshini wemaski kungakapheli isonto. Siphinde futhi samukele ukwenza ngokwezifiso. Imishini yemaski eyenziwe ngezifiso ingathunyelwa kungakapheli izinsuku ezingama-20 zokusebenza.
Yini Amakhasimende Okushoyo?
Ikhwalithi ephezulu, isivinini esizinzile, futhi isebenza kahle kakhulu. Kuyisinqumo esingcono kakhulu sokwenza imaski, sidalele inani. ——UDmitry
Nginawo umshini, iphakethe lawo lihamba kahle kakhulu, lapho ngiqala ukusebenzisa, lo njiniyela wasefekthri unginikeza ukusekelwa okungcono, ngongcweti .—— Murat
Le yinkampani enkulu ukubhekana nayo. Omele insiza yami ubenesineke, uphendula yonke imibuzo yami futhi wanikeza izeluleko ezinolwazi futhi ezifika ngesikhathi neziphakamiso. ——UHumphrey
Lesi yisikhathi sami seFrist sokuthenga umshini eChina, Kusuka kweminye impendulo yamakhasimende, bathe izimpahla zaseCHINA azizinhle, kepha ngijabule kakhulu ukuthi nginenhlanhla enkulu ukuhlangana ne-HAOJING, banginikeza insizakalo enhle kakhulu ngemuva kokuthola. —— IHaroon
Ukufakwa kwe-maching yami kufakiwe futhi kusebenza ngesivinini sama-40pcs ngemizuzu futhi kusebenza kahle kakhulu, ngihlela ukuthenga isethi eyodwa futhi, ngivumele ngibe nesikhathi esimnandi, ngiyabonga ukuzuza! —— u-Omar
Siyinkampani yokukhiqiza nokuhweba ehlanganisa imboni kanye nezohwebo. Iqembu lethu lifana nomndeni omkhulu. Wonke umuntu unezibopho zomsebenzi wakhe. Sinamasiko ethu ezinkampani, okuxoxwa ngawo sonke. Njalo ngonyaka sinemisebenzi yeqembu futhi sihambela izindawo ezahlukahlukene. Nyanga zonke kunemicimbi yokuzalwa yabasebenzi, futhi sisebenza esimweni esinenjabulo nesikhululekile. Vele hhayi lokho kuphela, sinohlelo oluqinile lokuphatha ukuze sikwazi ukuqedela umsebenzi wethu kangcono futhi senze inkampani ibe namandla futhi iqine.